‘हो, म भगवती पाण्डे नै बोल्दै छु तर, तपाईंले कुन भगवतीलाई खोज्नुभएको हो कुन्नी!’ मैले भने। ‘तपाईंले मेरो बारेमा दुई दिन पहिले के लेख्नुभएको थियो? मलाई चिन्नुहुन्छ? म को हुँ? के गर्छु थाहा छ?’
शनिबार, फाल्गुण २८, २०७३ १४:५५:५८